Veliranon’ny filoha Rajoelina rahateo ny handrakotra ala maitso an’i Madagasikara. Manana toerana famokarana zanakazo ny sampandraharaha iraisam-paritry ny tontolo iaianana sy ny fampandrosoana maharitra (DIREDD) any Androy, Anosy ary Atsimo Atsinanana, toy ny ao Fanjahira kaominina ambanivohitr’i Ifarantsa any amin’ny faritra Anosy. Zanakazo hatrany amin’ny 10 tapitrisa no azo vokarina ao, ka eo amin’ny 3 tapitrisa eo no efa vonona amin’izao fotoana izao, hoy ny Talen’ny DIREDD Haingosoa Hortensia. Tsy ao ihany fa misy ihany koa any Androy izay kendrena hamokatra 5 tapitrisa ary tahaka izany ihany koa ny any Atsimo Atsinanana. Raha tratra ny 10 tapitrisa ao Fanjahira sy ny 5 tapitrisa avy any Atsimo Atsinanana sy Androy, dia tratra ny 20 tapitrisa ho an’ny 20 000Ha. Tanjon’ny filoha ny 40 000Ha isan-taona handrakofana an’i Madagasikara. Izahay eto amin’ny DIREDD Anosy dia efa mahavita ny antsasak’izay raha izao zava-misy izao, fa mila fotoana kely fotsiny hanaovana azy dia tratra ny tanjona, hoy io tompon’andraikitra io. Mihena hatrany amin’ny 50% ny tahan’ny doro tanety, tato anatin’ny fotoana nitantanako. Ny afo fahita andavanandro dia tsy fahamaizana ala fa vokatry ny fandiovana bozaka, hoy Rtoa Haingosoa Hortensia.